जनताको साथ पाए, कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति हुने पक्का छ! « Media for all across the globe
जनताको साथ पाए, कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति हुने पक्का छ!
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पुनः चर्चामा आएका छन्। उज्यालो नेपाल अभियानमा ब्यापक सफलता पाएका घिसिङ आगामी कार्यकालका निरन्तरता पाउँछन् या पाउँदैनन्– त्यो भने सरकारको हातमा रहेको छ।
घिसिङलाई देश लोडसेडिङबाट मुक्त बनाएको सबैभन्दा ठुलो जस जाने गरेको छ। देशभित्र वा बाहिर रहेका नेपालीहरुले घिसिङलाई पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक निरन्तरता दिनुपर्ने अभियान नै थालेका छन्। यसबीचमा बिभिन्न मानिसहरुका महत्वपूर्ण बिचार तथा सुझाबले सामाजिक सञ्जाल कुलमानमय समेत बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा चर्चित अभिनेता तथा “मह” जोडिका “ह” अर्थात् हरिवंश आचार्यले कुलमानको उर्जाले देशको उर्जा बढ्ने बताएका छन्।
फेसबुकमा हरिवंश आचार्य लेख्छन् – यो देशमा अन्धकार ल्याऊनेहरु धेरै छन् तिनीहरुलाई खोजी खोजी हटाउनु पर्छ | ऊज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौ । उहॅाको ऊर्जाले देशको ऊर्जा बढ्छ ।
पत्रकार बिराट अनुपमले सामाजिक सञ्जालमा बाँकी कार्यकाल पनि निरन्तरता दिएर आगामी चुनावपछि उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। पत्रकार अनुपमको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएर उर्जा मन्त्री बनाउँनुपर्ने बिचारलाई घिसिङ समर्थकहरुले जय–जयकार गरिरहेका छन्।
फेसबुकमा पत्रकार अनुपम लेखछन् – कुलमानलाई अझै बाकी कार्यकाल दिदै आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन उठाएर पछि उर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ। त्यो अगाडि नेपालले बाङ्लादेशलाई बिजुली बेच्नुपर्छ। भारतबाट आएको आयातलाई निर्यातले जित्नुपर्छ। MCC पारित गरेर घिसिङको कार्यालयले तयार गरेको ट्रान्समिसन लाइन गुटुटु सम्पन्न गर्नुपर्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिने लगभग पक्कापक्की भएको छ। बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा घिसिङबारे सामान्य छलफल भएपनि आधिकारिक निर्णय गरिएको छैन।
स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङको बिकल्प नखोजिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई जानकारी दिएका छन्। सामाजिक संजालमा घिसिङलाई नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन नागरिकस्तरमा व्यापक दवाब परेपछि सरकारलाई समेत नैतिक संकट परेको छ।
आफ्नो चार बर्षे कार्यकाल सकाउने अन्तिम तयारीमा रहेका घिसिङलाई नै अर्को चार बर्षका लागि पनि कार्यकारी निर्देशक बनाउन दवाव परेको हो।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन देशव्यापी दवाव सिर्जना भएको छ। घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने सन्दर्भमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन लगायत अन्य केहिँ मन्त्रीहरु सकारात्मक नदेखिएपनि नागरिकस्तरबाट उनलाई पुनः नियुक्तीको दवाव परिरहेको छ।